न्यूरो डाक्टरको कमालः यसरी बचाए वलीलाई • nepalhealthnews.com
पुरुषोत्तम घिमिरे, जनस्वास्थ्य सरोकार || प्रकाशित मिति :2019-01-01 11:56:19
वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मलेसिया गएका रुकुम जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र त्रिवेणी गाविस—१ का २७ वर्षीय कृष्ण वली दशैं मनाउन घर आएका थिए । दशैंको नवमीका दिन गाउँको कालरात्री पूजाको मेला भर्न गएका वलीलाई सामान्य भनाभनमा गाउँका केही केटाहरुले मार्ने उद्देश्यले उनको गर्दनमा धारिलो चक्कु प्रहार गरेर जीवनमरणको दोसाँधमा पुर्याएका थिए । भुँईमा लडाएर मार्नका लागि उनको गर्दनमा छूरी रोपिएको थियो । रोपिएको छूरी निकाल्न खोज्दा नसकेर अपराधीहरु भागेको अवस्था थियो । घटना २०७५ साल कात्तिक १ गते दशैंको नवमीका दिन भएको यस घटनाका घाइते २ गते विजयादशमीका दिन गर्दनमा रोपिएको छुरा जस्ताको जस्तै लिएर पुगेका थिए ।
शुरुमा घटनापछि तत्काल बाँकेको कोलहरपुरमा रहेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल लगेपनि जटिल घटना भएकाले हवाइजहाजमा नेपालगञ्जबाट दशमीका दिन भिनाजुपर्ने गोपालसिंह कार्कीको सक्रियतामा काठमाडौंको न्युरो हस्पिटल लगिएको थियो ।
यो घटनामा बिरामी र उपचारमा संलग्न हामी डाक्टर नै लक्की मान्नुपर्छ किनभने गर्दनभित्र महत्वपूर्ण नसा रहेका हुन्छन् । मस्तिष्कमा रगत सञ्चार गर्ने मुख्य नसा, खानानली, स्पाइनल कर्ड, श्वासप्रश्वास नली गर्दनमा हुन्छ ।
मस्तिष्कमा रक्तसञ्चार गर्ने मूल नसा गर्दनको अगाडिको भागबाट पास भइरहेको हुन्छ । गर्दनमा गाडिएको छूरी पछाडिको भागबाट छिरेर अगाडिको भागसम्म पुगेको थियो । अर्को जटिलता के थियो भने छूरी नै बांगिएर एकातिरको भागमा सिधा भएर बसेको थियो ।
यदि मेरुदण्ड काटिएको भए बिरामीको हात खुट्टा चल्दैनथ्यो । जीवनभर ह्विल चेयरमा रहनुपर्ने अवस्था आउनसक्थ्यो । त्यो बाहेक अरु धेरै जटिल कम्प्लिकेसनको समस्या देखिनसक्थ्यो । गर्दनको मूल नसा काटिएको अवस्थामा ‘आमा’ पनि भन्न नपाइ बिरामीले ज्यान गुमाउन सक्छ । त्यसैले यो जटिल शल्यक्रिया हो ।
आकस्मिक कक्षमा बिरामी पुग्दा बोलिरहेको अवस्था थियो । तर घोप्टो पारेर ल्याइएको थियो । बिरामीको अवस्था उठेर बस्ने खालको थिएन । हातखुट्टा राम्रोसँग चलेको थियो । सास फेर्न कठिनाइ थिएन । आकस्मिक कक्षमा बिरामी हेर्ने सामान्य प्रक्रिया हुन्छ । श्वासप्रश्वास र रक्तसञ्चारको अवस्था, नसामा कुनै कमी कमजोरी भएनभएको हेरिन्छ ।
बिरामीका आफन्तले बाहिर गरिएको एक्सरे रिपोर्ट लिएर आएका थिए । तर यसले मुल नसा भेटे नभेटेको देखिन्छ । यसका लागि तुरुन्त सिआर्म मेसिनबाट कुन पोजिसनमा कति गाडिएको छ भन्ने हेरियो । सिआमबाट हड्डीको संरचनामा क्षति पुगे नपुगेको हेरिएको थियो ।
सिटी एन्ओिग्राम वा एमआरआई एन्जिओग्राम गरेपछि मात्र मस्तिष्कमा आपूर्ति गर्ने रगतको नलीमा क्षति भएनभएको देखिन्छ । तर बिरामीको गर्दनमा चक्कु नै धसिएको र चक्कुले धेरै आर्टिफ्याक्ट निकाल्ने भएकाले सिटी एन्जिओग्रामजस्तो उच्च अनुसन्धान गर्नबाट पनि हामी बञ्चित भयौं । टोलीका अरु साथीहरुसँग छलफल गर्दा अल्ट्रासाउन्ड गरेर मस्तिष्कमा रगत आपूर्ति गर्ने मुख्य नसा क्यारोटिड आर्टरी र चक्कु धसिएको भाग हेर्यौं ।
हतियार रोपिएको घटनालाई चिकित्सकीय भाषामा इम्पेल्मेन्ट इन्जुरी भनिन्छ । ‘मेरो जीवनको करियरमा यस प्रकारको बिरामी म्यानेज गरेको दोस्रो घटना हो । रोपिएको चक्कुले ब्लिडिङ हुन दिँदैन । रगतको नसा थुनेर राखेको हुन्छ । चक्कु रोपिएको अवस्थामा बाहिरबाट निकाल्नु हुँदैन । रोपिएको चिज बाहिर निकालेपछि ब्लिडिङ भएर तत्काल व्यक्तिको मृत्यु हुनसक्छ ।’—डा. श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
‘स्याल मार्न जाँदा बाघ मार्ने तयारीमा जानुपर्छ’ भनेजस्तै हो यो सर्जिकल विधा पनि । सर्जिकल प्लानिङ इनडेप्थ हुनुपर्छ । यो घटनामा भास्कुलर सर्जनदेखि नाक कान घाँटीको डाक्टरलगायतका सबैको टिम खडा थियो । शल्यक्रिया गर्दा कम्प्लिकेसन पनि आउनसक्थ्यो ।
यस्तो घटनामा होसियार र सावधान अपनाउन नसकेको अवस्थामा चक्कु निकाल्ने क्रममा त्यसले वरिपरिका भागहरु पनि काट्दै आउँछ । यो आँखाले प्रत्यक्ष देखिँदैन । यसरी रोपिएका चिजहरु विशेषज्ञको परामर्श लिएर मात्र निकाल्नुपर्छ । अन्यथा बिरामीको मृत्युसमेत हुनसक्छ ।
‘अहिलेसम्मको अनुभव प्रयोग गरेर मस्तिष्कमा रगत आपूर्ति गर्ने मुख्य नसालाई सुरक्षित साथ छुट्यायौं र चक्कुलाई बिस्तारै निकाल्न सफल भयौं ।’—उपचारमा संलग्न न्युरो सर्जन डा. शिखर श्रेष्ठलेभन्नुभयो—‘चक्कुको टुप्पोले मुल नसालाई छोएर बसेका कारण नसा बचाउनु पनि चुनौति थियो । यसरी बिरामी बचाउन सफल भएकोमा निकै खुशी भएँ । यो मेरो लागि दशैंको उपहार जस्तै महसुस भयो ।’
यो घटनामा बिरामीले राम्रोसँग सास फेरेको छ कि छैन ? थुक निल्न गाह«ो छ कि छैन ? बिरामीको चेतनाको स्तर कस्तो छ ? बिरामी हेमोडाइनामिकल्ली स्टेबल छ कि छैन ? अर्थात बिरामीको रक्तचापदेखि मुटुको पल्स सही छ कि छैन भन्ने हो । त्यही अनुसार सर्जरीको योजना बनाउनुपर्छ ।
अस्पतालका न्युरो सर्जन डा.शिखर श्रेष्ठको सक्रियतामा डा.सन्ध्या पौडेल, डा.सुरेश सापकोटा र डा.विभूषण कालु श्रेष्ठलगायतका चिकित्सक टीममा हुनुहुन्थ्यो । यो सफलताले घाइते र घाइतेका आफन्त मात्र नभई उपचारमा संलग्न चिकित्सक र न्युरो हस्पिटल प्रशासनलाईसमेत खुशी तुल्यायो ।
पीडित वलीका अनुसार, उनी साथीभाइसँग मेला नजिकैको पसलमा बसिरहेको थिए । पसल बाहिर केटाहरु आएर बियरको बोतल फुटाउन थाले । ‘मेरो भाइले ‘यसरी बोतल नफुटाउनु, यसको टुक्राले खुट्टा काट्छ’ भन्दा उल्टै उनीहरुले भाइमाथि हातपात गर्न थाले । त्यसपछि म छुट्याउन गएँ, छुट्याउने क्रममा मेरो ज्वाँइ पर्ने रमेश खड्का लगायतका व्यक्तिले पछाडिबाट मेरो गर्दनमा चक्कु हाने र उनीहरु भागे’—वलीले घटनाको विवरण सुनाउँदै भन्नुभयो ।
‘चक्कु हानेपनि म बेहोस भइनँ । उनीहरुले फुटेको बियरको बोतल पनि प्रहार गरेकाले मेरो शरीरको अन्य भागमा पनि चोट लागेको थियो । घटना पछि मलाई मामा र ज्वाइँले बजारसम्म बाइकमा ल्याउनुभयो । त्यसपछि सार्वजनिक यातायातमा कोहलपुर सम्म दाइहरुले ल्याउनुभयो ।’— वलीले भन्नुभयो—त्यहाँ उपचार नहुने भएपछि नेपालगञ्जबाट हवाइजहाजबाट काठमाडौँ ल्याउनुभयो । अहिले म बाँचे । मेरो ज्यान बचाइदिनुभएकोमा न्युरो हस्पिटल र यहाँ काम गर्ने डाक्टर साबहरुप्रति निकै खुशी छु ।’